पर्यटनमन्त्रीलाई कसले देखायो अश्लील भिडियो ? – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७७, सोमबार २१:२५
काठमाडौं – जेठ ३ गते विभिन्न बैंकका सूचनाप्रविधि विभाग हेर्ने प्रमुखसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु ‘जुम मिटिङ’मा थिए । राष्ट्र बैंकले गरेको त्यो बैठकको उद्देश्य थियो, बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका बढ्दो प्रयोग र साइबर सुरक्षाका उपायहरुबारे छलफल गर्ने ।
कसले, कहाँ, कसरी त्यस्तो गर्‍यो ? कसैले ठम्याउन सकेनन् । अलमलमा परेका केही बैंकर तथा सूचनाप्रविधि विज्ञहरुले फटाफटी बैठक छाडे, ‘होस्ट’ले पनि छिटोछिटो मिटिङ ‘समाप्त’ गरे ।महिला वन प्राविधिक सञ्जालले पनि लकडाउनकै बेलामा एउटा भर्चुअल बैठक गर्ने तय गर्‍यो, जसका लागि जेठ ३ गते ‘जुम’ नै प्रयोग गर्ने निर्णय भयो ।
साइबर सुरक्षामा सरकारी उदाशीनता नांगियो, सरकार आफैं ‘जुम’ प्रवर्द्धक !
सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी कार्यक्रममा पनि अश्लील भिडियोको सोही सिलसिला दोहोरियो ।कोभिड–१९को रोकथामका लागि पर्यटनसम्वद्ध निर्देशिका जारी गर्न ‘जुम’मा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा पनि अश्लील भिडियो बज्यो ।
तर, नेपाल सरकारले भने यो एपलाई आफैंले प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । यो एप प्रयोगका लागि सरकारले विदेशी दाताको सहयोग नै लिएको छ ।संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सहयोग गरेको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई एक–एकवटा जुम लाइसेन्स युएनडीपीले दिएको छ ।
जुममाथि सुरक्षाको प्रश्न उठिरहँदा पनि सरकार जुमकै प्रयोगमा लालायित छ । जबकि सरकारी स्तरमा पनि यस्ता मिटिङमा प्रयोग हुनेसक्ने आन्तरिक सफ्टवेयहरु तयार छन् ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार सरकारले आफैंले सोर्स कोड प्रयोग गरी निर्माण गरेको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ टूल तयार छ । कतिपय कार्यालयले प्रयोग पनि गरिरहेका छन् ।
केन्द्रका प्रमुख सुनील पौडेल भर्चुअल मिटिङका लागि त्यस प्रकारका आफ्नै सफ्टवेयर सरकारसँग रहेको बताउँछन् । केही सरकारी निकायले त्यसको प्रयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।माग गरेमा सरकारी संस्थामा त्यस्तो कन्फ्रेन्सिङ टूल दिन सकिने पौडेल बताउँछन् । एक पटकमा दुई सय जनासम्मले कुराकानी गर्न मिल्ने गरी सरकारी क्लाउडबाटै यस्तो सुविधा लिन मिल्ने अवस्था छ ।सरकारी सूचनाहरुको संरक्षण र गोपनीयताका सवालमा सरकारी कन्फ्रेन्सिङ टुलको प्रयोग अपरिहार्य हुने विज्ञहरु पनि बताउँछन् ।
उनीहरुलाई म्युट गर्ने वा रोक्ने प्रयास गरेमा उनीहरुले नश्लभेदी र अन्य विभिन्न किसिमको गालीगलौज गर्ने गर्छन् ।विशेषज्ञहरुका अनुसार केही सुरक्षाको सेटिङ नमिलाउने हो भने अन्य साइबर आक्रमणको तुलनामा जुमको बैठक ह्याक गर्नु तुलनात्मकरुपमा सजिलो छ ।
अन्य साइबर आक्रमण भने पैसाका लागि हुने गरेको देखिन्छ । तर, जुमको ह्याकिङको उद्देश्य भने बैठक प्रभावित पार्ने र गलत सन्देश फैलाउने तथा अपमान गर्ने रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।विज्ञ कोइरालाका अनुसार जुम मिटिङ गर्दा र्‍यान्डम आईडी प्रयोग गर्नुपर्छ । जुमको पर्सनल आईडी सेयर गर्नुहुँदैन । ‘इनेबल पर्सनल मिटिङ आईडी’को प्रयोग गर्ने लगायत गरेमा जोखिम कम हुुन्छ ।
मिटिङ र क्लासरुमलाई प्राइभेट मोडमा राख्नुपर्छ र यसका लागि मिटिङको ‘पासवर्ड’ क्रिएट गर्नुपर्छ ।मिटिङको ‘वेटिङ रुम’लाई इनेबल गर्नुपर्छ । यसबाट कोही सीधै मिटिङमा सहभागी हुन सक्दैन । मिटिङको ‘होस्ट’लाई कसलाई मिटिङमा बस्न दिने, कसलाई हटाउने भनेर छान्न सहज हुन्छ । एकैपटक सबैलाई मिटिङमा बस्ने अनुमति नदिए, एक एक गर्दै छान्नुपर्छ ।
‘को–होस्ट’ बनाएर मिटिङको व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुन्छ । अनावश्यक र अपरिचित सहभागीलाई सकेसम्म भित्रन नदिनु र भिएको भए हटाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।मिटिङमा सहभागी गराउन पासवर्डको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा मिटिङको लिंक, आईडी र पासवर्ड सार्वजनिक गर्नुहुँदैन । यस्ता विवरण छनोट भएका सहभागीलाई मात्रै व्यक्तिगत रुपमा दिनुपर्छ ।
सबै सहभागी आएपछि ‘मिटिङ लक’ गर्न पनि मिल्छ । त्यसो गरिएमा मिटिङको बीचमा कोही पनि छिर्न सक्दैन । सबैसँग ‘स्क्रिन सेयरिङ’ बन्द गर्नुपर्छ । यसमा ‘वन्ली होस्ट’ अप्सन रोज्नुपर्छ । त्यो हुँदा कुनै अश्लील गतिविधि भए पनि सार्वजनिक हुन पाउँदैन ।च्याट बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ, च्याटमार्फत मिटिङमा हुनसक्ने अनैतिक वा अवरोध गर्नेखालका कुरा हुन पाउँदैन । सहभागीको माइक्रोफोन अफ (म्युट) गर्न सकिन्छ । जो बोल्ने हो, उसलाई समय दिएपछि मात्रै ‘अनम्युट’ गर्न सकिन्छ । सहभागीलाई कुनै कुरा राख्नुपर्ने भएमा ‘रेज ह्यान्ड’ अप्सनको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।